Global Voices teny Malagasy » Mpilatsaka An-tsitrapo Espaniola Roa Navotsotra Rehefa Notànana Nandritra Ny 21 Volana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jolay 2013 14:24 GMT 1	 · Mpanoratra Lourdes Sada Nandika (en) i Marianna Breytman, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Andrefana, Espaina, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Vonjy Voina
Nambara ny famotsorana tampoka ireo Espaniola roa mpanao asa soa avy ao amin'ny Doctors Without Borders , izay nalaina an-keriny tamin'ny 13 Oktobra 2011, taorian'ny 21 volana nitànana azy ireo.
Tamin'ny fotoana nangalana azy ireo an-keriny, niasa tamin'ny fananganana hopitaly ao Dadaab, tobim-pialokalofana midadasika indrindra manerantany  [es], miorina ao akaikin'ny sisintany Somaliana ao Kenya i Montserrat Serra sy Blanca Thiebaut, toby mampiatrano Somaliana atsasaky ny tapitrisa farafahakeliny izay nandositra ny main-tany sy ny ady tao amin'ny fireneny. Fantatra fa nalaina tao Somalia ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo rehefa avy notànana an-keriny ary nijanona tany nandritra ny fotoana ela.
Montserrat Serra (ankavia) Blanca Thiebaut (ankavanana), ireo Espaniola roa mpanao asa soa navotsotra taorian'ny 21 volana nitànana azy ireo tao Somalia. Sary nalefan'i José Campos tao amin'ny Twitter.
Tsy mazava ihany koa raha efa jiolahy mahazatra na mpikambana ao amin'ny vondrona Al Qaeda ireo mpaka an-keriny, satria maro amin'ireo mpanara-baovao no manasokajy ity tranga ity ho fampihorohoroana. Nampiantso valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny Doctors Without Borders taorian'ity vaovao ity, saingy nilaza i José Antonio Bastos, Filohan'ny DWB ao Espaina fa tsy afaka hilaza vaovao momba ny fizotry ny famotsorana izy ireo” mba tsy hampidi-doza ireo mpilatsaka an-tsitrapo ambiny ao Somalia na koa ireo mpanome vaovao”. Samy nandray anjara tamin'ny fifampiraharahana momba ny famotsorana ireo mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo na ny Fanjakana Espaniola na ny Fikambanana tsy miankina (ONG). Mety antony tsy nilazana ny vaovao ny mety ho fandoavana onitra, ny totalim-bola nalòa, sy izay niantoka ny fandoavana izany.
Maro ireo faly tamin'ny famotsorana azy roa vavy, tahaka an'i Beli Álvarez  [es], izay nisioka hoe:
@ Beli_Alvarez : Tenim-pitiavana sy fiarahabana avy amin'i @MSF_espana  ho an'ireo mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo roa. Fiarahabana ho an'ilay fikambanana tsy miankina amin'ny asa tsara iantsorohany eo amin'izao tontolo izao.
Kanefa tsy tenim-piarahabana avokoa ny hafatra rehetra. Maro tamin'ireo mpiserasera no nino fa nandòa onitra ho an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo roa ny fanjakana Espaniola ka naneho ny tsy fankasitrahany izy ireo, ary miampanga ireo mpilatsaka an-tsitrapo ho tsy malina sy mitady loza ho azy manokana.
burbman89 namela ity fanehoan-kevitra ity tao amin'ny vaovao, niseho tao amin'ny 20minutos.es  [es]:
Vola be no naloantsika Espaniola tamin'ireto” Samaritana tsara fanahy” ireto mba hahazoan'izy ireo aina tsara…. maninona raha mijanona any an-trano izy ireo!!!!
Tao anatin'io fampahalalam-baovao io ihany, niampanga ireo mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo ny mety hisian'ny fanafihan'ny Al Qaeda ny 1-2-3-4  [es]:
Valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nokarakarain'ny Doctors Without Borders ao Espaina hilazana ny famotsorana ireo mpilatsaka an-tsitrapo roa vavy. Sary navoakan'ny gazety DWB tao amin'ny Twitter.
(…) Hividy fitaovam-piadiana aminà tapitrisa euro izay nomentsika azy ny Islamista . Fitaovam-piadiana hoentin'ireo Islamista hakàna an-keriny Tandrefana maro sy hamonoana Afrikanina maro be. Fitaovam-piadiana hoentin'izy ireo hanafika.
Tsy tambo isaina ny loza naterak'ireto “mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo ireto”.
Nilaza i Rafael Bardají tao amin'ny gazetiboky La Gaceta fa [es] tamin'ny fanadihadiany, “Tsy Tahaka Ny Taloha Intsony ny Fanjakana ” [es], ,
Tsy singa tsy manam-pironana intsony ireo [mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo] izay nohajaina ireo, fa singa hafa ao anatin'ny ady. Ary zavatra miantraika tsy amin'ny fiarovana manokana ny tenan'izy ireo ihany izany, fa ho an'ny firenena iray manontolo (…). Tsy azo ekena sy tsy azo tohanana ny fandoavam-bola azy ireo tamin'izay nataony ary mandòa vola ho amin'ny famotsorana ireo mpikambana ao aminy.
Tahaka izany ihany koa i Ricardo Peytaví nizara ny heviny tamin'ny fanadihadiana “Fitsinjovana ny hafa zakaintsika mafy) ” [es] tao amin'ny gazety El Día
Ny zavatra tokana mba tiako fantarina dia ohatrinona no laniko tamin'izany rehetra izany raha asa no resahina, satria amin'ity volana ity, nandòa hetra maherin'ny ampahatelon'ny karamako aho. (…) nanjary singa mora ho an'ny mpanao meloka te hahazo vola mora foana ny olom-pirenena rehetra ao amin'ity firenena ity.
Na izany aza, maro ihany koa ireo mpiserasera sy bilaogera faly tamin'ny fiafaran'ity tranga fangalana an-keriny ity, ary nankasitraka ny asan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy ny fikambanana eny amin'ireny fiarahamonina sahirana ireny tahaka ireo mpitsoa-ponenana. Belén de la Banda niresaka momba izany tao amin'ny bilaogy 3500 millones  [es]
Blanca, Montse, sy ireo namany no fitondran-tena tsara ilaintsika halaina tahaka amin'izao fotoana anjakan'ny fisalasalana sy ahiahy izao. (…) tokony hitady fomba hahatsapana ny firaisantsika, hankasitraka ny ezaka lehibe sy ny lanjan'ny asa nahatonga azy ireo amin'izao toe-java-sarotra izao ny fiarahamonintsika. Satria ny olona tahaka azy ireo no mahatonga ny firenentsika sy izao tontolo izao ho mahafinaritra.
1358 nanoratra ity fanehoan-kevitra  [es] ity tamin'ny vaovao niseho tao amin'ny El País  [es]:
Ireo mpilatsaka an-tsitrapo tamin'ny fahatongavany tao Espaina taorian'ny famotsorana azy ireo. Sary tao amin'ny habaky ny RTVE.
Miaraka amin'ireo izay FALY noho ny fodian'ireto olona roa ireto aho ary amin'ny maha-MPANDOA HETRA AHY, HITAKO FA TSARA raha nandoavam-bola ny famotsorana azy ireo. Tsy voatamby ny aina, eny fa na ny ainan'ireo izay halantsika aza, ary tsara kokoa ny mandany vola (raha natao izany) ho an'ny OLONA toy izay ho an'ireo mpanao fanenjika ka mahita efatra TSY HAIHAY ka matoky tena fa manana iraka mifandraika amin'ny “iraka” ho an'ny “fandriampahalemana” sy ho an'ny “fanarenana.”
Na dia eo aza ny resabe mikasika ny fandoavana onitra tamin'ny fanavotana azy ireo, ny vaovao mahafaly dia tafaverina eny anivon'ny fianakaviany i Montserrat Serra sy Blanca Thiebaut, salama tsara sy avotra. Nanambara ny dokotera sy ny manam-pahaizana momba ny toetra (psykôlôgy) ao amin'ny DWB izay nanara-maso ny fahasalaman'izy ireo nanomboka tamin'ny famotsorana azy ireo fa tokony omena fotoana hialàny sasatra sy hiverina hiaina tsimoramora amin'ny fiainana andavanandro izy ireo, izany hoe tokony hiandry fotoana ny olona vao mahazo miresaka amin'izy ireo mikasika izay nanjoa azy ireo nandritra ny 21 volana nitànana azy ireo. Tazana nidina avy eny ambonin'ny fiaramanidina tao amin'ny seranam-piaramanidina ao Madriri fotsiny izy ireo, lasa mahia kely ary hita fa tena reraka, saingy mbola velo-tsiky. Antenaina fa ho salama haingana izy ireo ary hiverina hiaina amin'ny fiainana andavan'andro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/07/24/50466/
 tobim-pialokalofana midadasika indrindra manerantany: http://www.youtube.com/watch?v=9kv6jYABDgE
 Tsy Tahaka Ny Taloha Intsony ny Fanjakana: http://www.intereconomia.com/columna/ya-no-que
 Fitsinjovana ny hafa zakaintsika mafy): http://eldia.es/criterios/2013-07-20/10-Altruismo-pagamos-todos.htm